Xiddig Barcelona U Ciyara Oo Qirtay In Uu Cristiano Ronaldo Ka Dalbaday In Uu Kula Biiro Juventus - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Xiddig Barcelona U Ciyara Oo Qirtay In Uu Cristiano Ronaldo Ka Dalbaday In Uu Kula Biiro Juventus
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee Ivan Rakitic ayaa qirtay in uu xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo la soo xidhiidhay suuqii xagaaga si uu ugu qanciyo in uu kula biiro kooxda Juventus.
Kooxda Juventus ayaa isku dayday in ay la soo saxiixato xiddiga reer Croatia laakiin waxa ay ku fashilantay in ay heshiis la gaadho kooxda Barcelona taas oo keentay in uu xiddigu sii joogo kooxda Barcelona.
Raktic oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi”Intii lagu jiray suuqii xagaaga, Cristiano Ronaldo ayaa si toos ah iila soo xidhiidhay isaga oo ii sheegay in dhamaan xiddigaha Juventus doonayaan in aan ku biiro kooxda laakiin Juventus ayaa dalbatay lacag 50 Milyan ah taas oo keentay in uu heshiisku fashilmo”.
“Xagaagii waxa ila hadlay madaxweynaha kooxda iyo Lionel Messi kuwaas oo ii sheegay in aan fursad u haysto in aan isaga tago kooxda, laakiin waxa aan sir ahayn in aan doonayo in aan sii joogo Barcelona waliba u dagaalamo booskayga”.
Ivan Rakitic ayaa sidoo kale lala xidhiidhinayay PSG kuwaas oo ay doonaysay in ay Barcelona ka qayb dhigto heshiiskii ay ku doonayeen Neymar.